Marik Authentik - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarie Claire
UMarie Claire yi-Superhost
Ngaphezu kokuhlala nje, phila amava awodwa entliziyweni yeentaba zeSavoyard. Kwi-chalet yosapho yokwenyani, ziphathele ikhefu lendalo, uqhawulo kubomi besixeko kwindawo ekhululekileyo apho umbono ophefumlayo weentaba usenza ngaphandle kwemihombiso. Indawo encinci yoxolo yemizuzu engamashumi amathathu ukuhamba ukusuka entliziyweni yeParadiski kunye nabaninzi ukusuka kwiziko le-Ski eNordic.
Ngaphezu nje kwendawo yokuhlala, phila amava akhethekileyo entliziyweni yeentaba zeSavoyard, abagcini bale ndawo incinci yokusabela yangasese bahlala kwi-chalet engaphezulu nje.
Kwilali echazwe njenge-alpine chalet, sinikezela nge-chalet yosapho eyinyani ebuyiselwe ngokuhambelana nezithethe zasekhaya. .Thatha ixesha lokuphumla kwendalo, ukuqhawulwa kubomi besixeko kwi-minimalism ekhululekile apho umbono ophefumulayo weentaba wenza ngaphandle kwemihlobiso. Indawo encinci yoxolo malunga nemizuzu engamashumi amathathu ukuhamba ukusuka entliziyweni yeparadiski kunye neevenkile zayo kunye neendawo zokutyela. Ebusika ukufikelela ngemoto akunakwenzeka, i-chalet ikwimizuzu eli-15 yokuhamba ukusuka kwipaki yemoto,
Igumbi lokuhlambela elinebhafu edityaniswe kwi-cellar yetshizi endala ehlaziyiweyo iya kukunika amava angaqhelekanga okuphila kakuhle. Igumbi lokuphumla ligumbi labelusi, sikuxhobise ngayo yonke into oza kuyidinga, ukusuka kumashiti ebhedi ukuya kwi-cutlery. Ungaboleka ixesha izileyi zomthi kuthi. I-chalet inesitovu senkuni, esiza kusetyenziselwa ukupheka kwaye siya kuvuyisa abo bafuna i-cocooning kunye nebandayo. Ngokuphathelele ukutya kunye nesidlo sakusasa, xa uceliwe kunokwenzeka ukuba ujabulele, umzekelo, i-fondue yasekuhlaleni efanelekileyo. Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi ngeenkcukacha ezithe vetshe.
Umamkeli, uMarie Claire, owayesakuba yintshatsheli ye-snowboarding kunye nokukhwela, ngoku ongumqeqeshi kuzo zombini izifundo, uya kuvuya ukwabelana ngolwazi lwakhe lwedolophana kunye nentaba akhulele kuyo waza wafundisa. Le chalet yeyayisemkhulu noninakhulu awayenayo entliziyweni yokuyibuyisela ukuze ayenze indawo yobomi efudumeleyo njengemeko awayeyazi kuyo.
I-hamlet ngokwayo isembindini wenqanaba lesithathu lenkwenkwezi ye-off-piste ski indlela. Le iqhele imizuzu embalwa nasemkhenkceni ukusuka kwigumbi ka Vernettes, isayithi imbali okuyimfihlo, malunga imizuzu engamashumi amathathu ngeenyawo ukusuka intliziyo iiholide ka Peisey Vallandry kwaye ukusuka Vanoise va ukufikelela evumela ukuba ukufikelela Plagne.
Ukusuka kwi-chalet kunokwenzeka ukuba uhle nge-skis okanye ngeenyawo uye kwisikhululo sebhasi esikusa kwindawo ye-ski yase-Peisey Vallandry,
Iziko leNordic likumgama wemizuzu emi-5 ngebhasi kwaye yindawo yokuqala yokukhwela ikhephu, ukutyibiliza kwenja, ukutyibilika ekhephini...
Ukufika eMarik Authentik: https://youtu.be/VkNcgP1lAwE
Umbuki zindwendwe ngu- Marie Claire
Ngubani uMarik? https://www.youtube.com/watch?v=oW_-HGeEzr8
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Peisey-Nancroix